Kitty For Me: June 2007
Buzz - Dignal Signal Part 2
02.사랑은 가슴이 시킨다
03.사랑은 가슴이 시킨다
ဒီကားကလဲ အရမ်းကောင်းလာပြီ။ တော်သေးတယ် စာတန်းထိုးက ပြန်ထွက်လာလို့။ အစက စာတန်းက ၇ ထိပဲ ထွက်ပြီးတော့ တော်တော်ကြာရပ်သွားတယ်။ သူ့နောက်ကပြတဲ့ကားတွေတောင် သူ့ကိုကျော်ကုန်ပြီ။ Air City ဆိုရင်လဲ တော်တော်နောက်ကျမှပြတာတောင် စာတန်းက အပိုင်း ၈ ထိထွက်သွားပြီ။ အခု Devil လဲ အပိုင်း ၉ ထိထွက်လာပြီဆိုတော့ တော်တော်ပျော်သွားတယ်။
စုံထောက်မင်းသားက အထက်ကျောင်းတုန်းက ရှေ့နေလုပ်နေတဲ့မင်းသားရဲ့ အစ်ကို သတ်မိခဲ့တယ်။ ထင်တာတော့ ရှေ့နေလုပ်တဲ့မင်းသားက ပြန်လက်စားချေတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဇာတ်လမ်းက အပိုင်း ၇ မှာထဲက စုံထောက်မင်းသားက လူသတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြသွားတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ တစ်ပိုင်းကြည့်ပြီးသွားရင် အဆုံးထိကြည့်လိုက်ချင်စိတ်တစ်ခါပေါ်တယ်။ စာတန်းထိုးမပါပဲ ကြည့်လိုက်ရင်လဲ နောက်စာတန်းထွက်လာတဲ့ အချိန်ကျတော့ မကြည့်ချင်တော့ဘူး။ နဲနဲပျင်းသွားရော။
အခုပုံလေးတွေက ရှေ့နေလုပ်တဲ့မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးတို့ရဲ့ ပုံလေးတွေ။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ ရိုက်ထားတာလေးက ချစ်စရာလေး။ မင်းသားကလဲ ချော။ မင်းသမီးနဲ့လဲ လိုက်တာပါပဲ။ သူတို့ပုံလေးကို ကာတွန်းပြန်ဆွဲထားတာလဲ ချစ်စရာလေးနော်။
အခုအဲဒီဇာတ်လမ်းထဲက main theme သီချင်းလေးကို ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်တယ်။ ဆွန်ပိထဲမှာ အဲဒီသီချင်းလေးကို ကိုရီးယားလိုစာသားနဲ့ အသံထွက်ရေးထားတာတွေ့တယ်။ ဘာသာပြန်ကို လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ နောက်ရှာလို့တွေ့မှာ ဘာသာပြန်ထားတာလေးထပ်တင်တော့မယ်။
OST - Devil (Main Theme)
나를 멈출 수가 없어요. 이젠 어쩔 수가 없어.
기다리지 말아요. 돌아보지 말아요.
제발 나쁜 나를 사랑하지 말아요.
나를 사랑하지 말아요. 받을 자격 내겐 없죠.
다른 세상이 있죠. 같은 하늘
. 같은 땅에도나의 아픈 가슴을 알아채지 못하는 세상.
# 사랑해요. 사랑해요. 수없이 그대 뒤에 숨어 고백을 했죠.부탁해요.
비켜가요. 지금은 그댈 행복하게 할 수 없는 날.
Nareul meomchulsuga eopseoyo..
ijen eotcheolsuga eopseo..
Geudaen baram cheoreom gaseyo..
uri saranghagi jeone
Naneun chajeulge itjyo..
irheobeorin kkumgwa jinshildeul..
Naega neomu ap’aseo geudae soneul jabji mathajyo..
*saranghaeyo.. saranghaeyo.. su opshi geudae
dwie sumeo gobaekeul haejyo..
igeumeun geudael haengbokhage halsu oeomneun nal
jebal nappeun nareul saranghajimarayo..
padeun jagyeok naegen eopjyo
Joheun gotman bogo gaseyo.. kkeutnae seulp’eojigi jeone..
Dareun sesangi itjyo.. gateun haneul.. gateun ttange do..
naye ap’eun gaseumeul arachaeji mothaneun sesang..
sumanheun gojit soge igeon jinshirin geotjyo
Daeum beone.. daeumbeone..
jeogodo geudae sarangmaneul nohji aneujilkkeyo..
Gaseumi da heoreosso.. nunmuri chaollado..
geudae gyot’e itneun nan haengbokhaltenikka
kitty လေးတွေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
နားထောင်တိုင်းမရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းလေး။ သူငယ်ချင်းက ဒီ swf လေးကို ဟိုတစ်နေ့က ပို့ပေးထားတာ။ အရင်တုန်းကလဲ အဲဒီသီချင်းနဲ့ flash ဖိုင်လေးတစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိဘူ။ Big Bag ရဲ့ နီးနီးလေးနဲ့ဝေး သီချင်းလေးလဲ ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ အဲဒီ flash လေးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်တတ်ချင်တယ်။ သီချင်းလေးထည့် စာသားလေးတွေ ပုံလေးတွေနဲ့။
Posted by Me at 2:40 AM2comments:
အခုတစ်လော စိတ်ညစ်စရာတွေများတယ်။ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်း။
Posted by Me at 2:26 AM3comments:
ဘယ်တော့ထွက်မှာလဲ ဟယ်။ မျှော်လိုက်ရတာ...ကြာနေပြီ။ Virgin Snow
Virgin Snow Theme Song
900 Tatoo Designs
တက်တူးထိုးကြ မလားဟင်။ တက်တူးထိုးတာကို ကြိုက်လား။ ဘန်ကောက်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေ တော်တော်တက်တူးထိုးကြတာ တွေ့ရတယ်။ ခါးမှာရော။ လက်မောင်း။ နောက်ပြီး ခြေကျင်းဝတ်မှာရော။ အခု ဒီမှာ တက်တူးဒီဇိုင်း ၉၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်နော်။
Oh Jong Hyuk - That's Love
click B အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင် Oh Jong Hyuk ရဲ့ Single Album ထွက်လာပြီ။ သူတို့အဖွဲ့ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အဖွဲ့လိုက်မဆိုတော့ဘူးလား မသိဘူး။ သူ့ MTV လေးလဲ ကောင်းတယ်။ အရင်တုန်းက သူက ဆံပင်အရှည်နဲ့။ အခု ဆံပင်တိုလေးညှပ်ထားတယ်။ (စိုင်းစိုင်းနဲ့တူသလိုပဲ)
ဒါက သူ့ရဲ့ MTV
သီချင်းလေးက ဒီမှာ နားထောင်လို့ရတယ်။
သီချင်းလေးကို ချစ်တာလား တို့ကိုချစ်တာလား
"သီချင်းလေးကို ချစ်တာလား တို့ကိုချစ်တာလား
တော်တော်ရိုက်ချင်စရာကောင်းတဲ့ Waiter တွေ။
Beauty of Maths !
စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်းက အမြဲတန်း ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေ ပို့လေ့ရှိတယ်။ သူ့ဆီက မေးလ်လေးတွေက ဖတ်လို့လဲကောင်းတယ်။ အခုလဲ beauty of maths တဲ့လေ။ မိုက်တယ်။
oh! I'm so happy now. The blog is opening now. I can't access my blog for several days. TOT blocked the blogspot. I can't read any blog or I can't wirte at my blog. That's ok now.
မနေ့က ရုံးကပြန်တော့ the Mall ကနေ 122 စီးပြီး အိမ်ကို ပြန်ဖြစ်တယ်။ the Mall ကနေ အိမ်ကိုပြန်ရင် စီးစရာ ကားတွေပေါတယ်။ ဒီတော့လဲ တွေ့တဲ့ကားကို တက်စီးလိုက်တာပဲ။ ပြသနာက 122 ကားတွေက အရမ်းကြမ်းတယ်။ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းမဲ့သူပါလဲ ရပ်ချင်မှ ရပ်ပေးတယ်။ ကျော်ပြီးမှ ရပ်ပေးချင်ရပ်ပေးတယ်။ အဲဒီ တော့ ပြသနာဖြစ်ကြရော။ မှတ်တိုင်ရောက်ခါနီးလို့ bell တီးတော့ ကားကို ရပ်မပေးဘူး။ ဘေးကနေကျော်တက်ပြီး တခြားကားနဲ့ ပြိုင်မောင်းနေလို့။ နောက်တစ်မှတ်တိုင်ကျမှ ရပ်ပေးတယ်။ အဝေးကြီး လမ်းပြန်လျှောက်လိုက်ရတယ်။ နှမခြင်းမစာမနာ..သူတို့ကားပြိုင်မောင်းချင်တာနဲ့။ နောက်တစ်ခါ 122 ဘယ်တော့မှ မစီးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အခုဒါက ပထမ အခေါက်လဲ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အဲလိုကားသမားမျိုး အမြဲတွေ့တယ်။ လမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်းနဲ့ ကားသမားတွေ ကားစပါယ်ယာတွေ အကြောင်းကို တွေးမိတယ်။
(၁)တစ်ချို့ ကားသမားတွေက အရမ်းသဘောကောင်းကြတယ်။ မှတ်တိုင်မှာလဲ သေသေချာချာရပ်ပေးကြသလို စီးမယ့်သူက တားရင်လဲ ရပ်ပေးကြတယ်။ ကားမောင်းတာလဲ ဂရုစိုက်ကြတယ်။ မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့သူတွေ ရပ်ရခက်အောင် မလုပ်ကြဘူး။ Break အုပ်ရင်လဲ ညင်ညင်သာသာပဲ။ ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားတွေ ဆင်းမယ်ဆိုရင်လဲ သေသေချာချာ ရပ်ပေးကြတယ်။
(၂)တစ်ချို့ကားသမားတွေက အရမ်းစိတ်ရှည်လွန်းတယ်။ စီးမယ့်သူ ရှိရှိ မရှိရှိ မှတ်တိုင်တိုင်းမှာ ရပ်တယ်။ မှတ်တိုင် မဟုတ်လဲ လမ်းမှာ လက်ပြပြီးတားတဲ့ သူတွေကိုလဲ ရပ်ပေးတယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့ရင် အမြန်လိုတဲ့ အချိန်ကြရင် နဲနဲစိတ်ညစ်ရတာက လွဲလို့ ကိုယ်ဆင်းရမယ့် အချိန်အတွက် စိတ်ချမ်းသာရတယ်။
(၃)တစ်ချို့ကားသမားတွေက သွက်တယ်။ မှတ်တိုင်မှာ လူမရှိရင် မရပ်တော့ဘူး။ အဝေးကနေကြိုကြည့်ထားတယ်။ ကားရှင်းရင် ရှင်းသလို သွက်သွက်လက်လက်မောင်းပေးတယ်။ ဆင်းမယ့်သူ တက်မယ့်သူရှိရင်လဲ ချက်ခြင်းမှတ်တိုင်ကို ၀င်လိုက်တယ်။ ခပ်သွက်သွက်လေး ပြန်မောင်းထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကားမောင်းတာ မရမ်းဘူး။ သူတို့နဲ့တွေ့ရင် ကိုယ်သွားမယ့် ခရီးကို ခပ်မြန်မြန်လေးရောက်တယ်။
(၄)တစ်ချို့ကားသမားတွေက စိတ်မရှည်ကြဘူး။ မှတ်တိုင်မှာ တက်မယ့်သူက လက်ပြနေပေမယ့်လဲ ရပ်ပေးချင်မှ ရပ်ပေးတယ်။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လမ်းလယ်ကနေ တစ်ခြားကားတွေကို ကျော်တက်သွားတယ်။ အဲလိုပဲ ဆင်းမယ့်သူရှိလဲ မှတ်တိုင်မှာ တခြားဘတ်စ်ကားတွေ တန်းစီနေရင် နောက်ကနေ စောင့်ပြီးမရပ်ချင်တော့ဘူး။ အဲလိုမျိုးဆိုရင် အဝေးကြီးကထဲက ဆင်းရင်ဆင်းထား...ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မှတ်တိုင်ကို ကျော်ပြီး အဝေးကြီးမှာ ရပ်ရင်ရပ်..မရပ်ရင်တော့ နောက်တစ်မှတ်တိုင် ရောက်ပြီသာမှတ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်။
(၅)တစ်ချို့ကားသမားတွေက ကားကို အရမ်းမောင်းတယ်။ ပြိုင်ချင်တယ်။ Break ကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီးအုပ်တယ်။ ကားပေါ်မှာ ရပ်နေတဲ့သူတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်။ Bell တီးရင်လဲ ရပ်ပေးချင်မှ ရပ်ပေးတယ်။ တက်မယ့်သူရှိလဲ မသိသလိုနဲ့ ကျော်သွားကြတယ်။ မှတ်တိုင်နီးရင်တော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ မှတ်တိုင်တွေ ဝေးတဲ့အခါ မှတ်တိုင်ကျော်ဆင်းရတဲ့ သူတွေက စိတ်ညစ်ကြရတယ်။ ကားကလဲ အကြမ်းပတမ်းမောင်းတော့ ဆင်းခါနီးရင်လဲ လဲမှာစိုးရ..သူများကို တိုက်မိခိုက်မိမှာစိုးရ။ ကိုယ့်ကိုလဲ သူများတွေလို မှတ်တိုင်ကျော်ပြီး ရပ်မလား မရောက်ခင်ကတည်းက ရပ်မလား စိတ်ပူနေရတယ်။ မျက်နှာထားတွေကလဲ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ မျက်နှာထားတွေနဲ့။
အမှန်တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ကိုယ်ကျရာ တာဝန်မှာ ထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေပါ။ သင်ရော..ဘယ်လို လူမျိုးလဲ။ ကိုယ်ကျတဲ့ တာဝန်မှာ တာဝန်ကြေရဲ့လား။ ကိုယ့်ကြောင့် လူတစ်ဖက်သားမှာ စိတ်ဆင်းရဲသွားရသလား။ စိတ်ချမ်းသာသွားရသလား။ ပြန်လယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
Posted by Me at 7:39 PM2comments: